Yehowa Adansefo De Asɛnka Ho Nsɛm Kɔ Asɛnnibea | Onyankopɔn Ahenni
Sɛnea Yesu hyɛɛ ho nkɔm no, wɔahyehyɛ mmara a wɔde reko tia asɛnka adwuma a ne nkurɔfo reyɛ no
1, 2. (a) Dɛn na nyamesom akannifo no tumi yɛe wɔ asɛnka adwuma no ho, na asomafo no yɛɛ wɔn ade dɛn? (b) Bere a wɔbaraa asɛnka adwuma no, dɛn nti na asomafo no kɔɔ so kaa asɛm no?
NÁ ƐYƐ Pentekoste afe 33 Y.B. mu akyi pɛɛ. Ná wɔhyehyɛɛ Kristofo asafo a ɛwɔ Yerusalem no nkyɛe koraa. Ɛda adi sɛ, Satan hui sɛ ɛyɛ bere a ɛsɛ sɛ ɔyɛ biribi. Enti, ɔfaa adwene sɛ obetu asafo no ase ansa na agye ntini. Ntɛm ara na Satan yɛɛ n’ade wɔ ɔkwan bi so a ɛbɛma nyamesom akannifo no abara Ahenni no ho asɛmpaka adwuma no. Nanso, asomafo no kɔɔ so kaa asɛm no akokoduru so, na mmarima ne mmea pii bɛyɛɛ “wɔn a wɔagye Awurade adi.”​—Aso. 4:​18, 33; 5:14.
Asomafo no ani gyei “efisɛ wɔabu wɔn sɛ ne din nti wɔfata sɛ wogu wɔn anim ase”
2 Eyi hyɛɛ asɔretiafo no abufuw ma wɔsan kekaa wɔn ho bio​—saa bere yi de, wɔde asomafo no nyinaa guu afiase. Eduu anadwo no, Yehowa bɔfo bebuee afiase pon no, na eduu anɔpa no, na asomafo no apue a wɔreka asɛmpa no! Wɔsan kyeree asomafo no de wɔn kogyinaa atumfoɔ no anim, na wɔbɔɔ wɔn sobo sɛ wɔabu mmara a ɛkyerɛ sɛ ɛnsɛ sɛ wɔka asɛmpa no so. Asomafo no de akokoduru kae sɛ: “Ɛsɛ sɛ yetie Onyankopɔn sɛ sodifo mmom sen nnipa.” Asɛm no hyɛɛ atumfoɔ no abufuw araa ma wɔpɛe sɛ “wokum” asomafo no. Nanso, bere a asɛm no mu yɛɛ den no, Gamaliel a ɔyɛ Mmarakyerɛfo a wobu no kɛse no kasa maa asomafo no, na ɔbɔɔ atumfoɔ no kɔkɔ sɛ: “Monhwɛ yiye . . . Mommfa mo ho nnhyehyɛ wɔn nsɛm mu, na munnyaa wɔn.” Anwonwasɛm ne sɛ, atumfoɔ no tiee n’afotu no, na wogyaa asomafo no. Dɛn na saa mmarima anokwafo no yɛe? Wɔn abam ammu koraa, na mmom “wɔkɔɔ so kyerɛkyerɛe kaa Kristo Yesu ho asɛmpa” no.​—Aso. 5:​17-21, 27-42; Mmeb. 21:​1, 30.
3, 4. (a) Ɔkwan bɛn na Satan afa so ako atia Onyankopɔn nkurɔfo fi bere tenteenten? (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ saa ti yi ne ti abien a edi hɔ no mu?
3 Saa asɛm a wɔde kɔɔ asɛnnibea wɔ afe 33 Y.B. mu no ne bere a edi kan a atumfoɔ no sɔre tiaa Kristofo asafo no, nanso ɛno anyɛ nea etwa to. (Aso. 4:​5-8; 16:​20; 17:​6, 7) Wɔ yɛn bere yi so no, Satan gu so ara repiapia nnipa a wɔsɔre tia nokware som no ma wɔkanyan atumfoɔ no ma wɔbara asɛnka adwuma no. Atamfo no akeka nsɛm pii agu Onyankopɔn nkurɔfo so. Emu biako ne sɛ, yɛyɛ basabasayɛfo a yɛsɛe ɔmanfo asomdwoe. Wɔsan ka sɛ, yɛyɛ amammɔfo; afoforo nso ka sɛ yɛyɛ aguadifo. Wɔ mmere a ɛfata mu no, yɛn nuanom akɔ asɛnnibea akoyi wɔn ho ano sɛ sobo ahorow a wɔde abɔ wɔn no yɛ atoro. Dɛn na afi nsɛm a wɔde akɔ asɛnnibea no mu aba? Ɔkwan bɛn so na atɛn a asɛnnibea ahorow abu mfe bi a atwam no ka w’ankasa nnɛ? Momma yensusuw nsɛm a wɔde kɔɔ asɛnnibea no mu kakra ho, na yɛnhwɛ sɛnea aboa ma yɛde ‘anoyi ama wɔ asɛmpa no ho na yɛde asi hɔ wɔ mmara kwan so.’​—Filip. 1:7.
4 Wɔ saa ti yi mu no, nea yɛbɛka ho asɛm titiriw ne sɛnea yɛabɔ mmɔden apere anya hokwan a yɛde bɛka asɛmpa no. Afei nso, wɔ ti abien a edi hɔ no, yebesusuw nsɛm a yɛde akɔ asɛnnibea sɛnea ɛbɛyɛ a yɛrenyɛ wiase no fã na ama yɛabɔ yɛn bra sɛnea Ahenni no hwehwɛ no ho.
Wɔyɛ Basabasayɛfo Anaa Wɔn a Wɔde Nokwaredi Ka Onyankopɔn Ahenni no Ho Asɛm?
5. Wɔ afe 1930 mfe no awiei no, dɛn nti na wɔkyeree Ahenni no ho asɛmpakafo no, na dɛn na wɔn a wodi asafo no anim no yɛe?
5 Wɔ afe 1930 mfe no awiei mu no, nkurow ne amantam a ɛwɔ United States of America nyinaa bɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛma Yehowa Adansefo agye tumi krataa bi ansa na wɔatumi ayɛ asɛnka adwuma no. Nanso, yɛn nuanom annye tumi krataa no, efisɛ na wonim sɛ wobetumi atwa tumi krataa no mu. Ná wonim sɛ aban biara nni hokwan sɛ osiw Ahenni no ho asɛmpa a Yesu de ama Kristofo sɛ wɔnka no kwan. (Mar. 13:​10) Eyi nti, wɔkyeree Ahenni asɛmpakafo pii. Ɛno maa wɔn a wodi ahyehyɛde no anim no yɛɛ wɔn adwene sɛ wɔde asɛm no bɛkɔ asɛnnibea. Ná wɔpɛ sɛ wɔma obiara hu sɛ etia mmara sɛ Ɔman no de ne nsa ato hokwan a Adansefo no wɔ sɛ wɔyɛ wɔn som adwuma no so. Wɔ afe 1938 no, asɛm bi sii a ɛkɔɔ asɛnnibea ma ɛbɛyɛɛ sɛnnahɔ. Dɛn na esii?
6, 7. Dɛn na ɛtoo Cantwell abusua no?
6 Benada anɔpa, April 26, 1938 no, Newton Cantwell a wadi mfe 60; ne yere Esther; ne wɔn mma Henry, Russell, ne Jesse​—a wɔn baanum nyinaa yɛ akwampaefo titiriw no​—puei sɛ wɔde da mũ no nyinaa rekɔka asɛmpa no wɔ kurow bi a wɔfrɛ no New Haven, Connecticut, no mu. Nokwasɛm ne sɛ, na wɔasiesie wɔn ho sɛ wɔrensan mma fie saa da no. Dɛn ntia? Ná wɔadi kan akyere wɔn mpɛn dodow bi, enti na wonim sɛ wobetumi asan akyere wɔn bio. Nanso, Cantwell abusua no amma eyi ammu wɔn abam wɔ Ahenni no ho asɛm a na wɔpɛ sɛ wɔkɔka no ho. Wɔde kar abien na ɛkɔɔ New Haven. Newton na ɔkaa abusua no kar a na Bible ho nhoma ne gramafon nketewa gu mu no, ɛnna Henry a wadi mfe 22 no nso kaa kar a akasam si so no. Nokwarem no, sɛnea na wɔhwɛ kwan no, ankyɛ koraa na polisifo baa wɔn so.
7 Nea edi kan no, wɔkyeree Russell a na wadi mfe 18 no, na afei wɔkyeree Newton ne Esther nso. Ná Jesse a wadi mfe 16 no ne wɔn ntam twe kakra, na ohui sɛ polisifo no de n’awofo ne ne nua no rekɔ. Ná Henry reka asɛm no wɔ kurow no fã foforo, enti ɛkaa aberantewa Jesse nkutoo. Ne nyinaa akyi no, ɔfaa ne gramafon, na ɔkɔɔ so kaa asɛm no. Mmarima baanu a wɔyɛ Katolekfo maa Jesse bɔɔ Onua Rutherford kasa a wɔakyere agu apaawa so a asɛmti ne “Atamfo” no, ma wotiei. Nanso, bere a mmarima no retie ɔkasa no, wɔn bo fuwii araa ma na wɔpɛ sɛ wɔhwe Jesse. Jesse anka hwee na ofii hɔ kɔe, nanso ɛno akyi bere tiaa bi no, polisini bi baa no so. Enti, wɔkyeree Jesse nso. Polisifo no ammɔ Onuawa Cantwell sobo biara, nanso Onua Cantwell ne ne mmabarima no de, wɔbɔɔ wɔn sobo. Nanso, wɔma wɔkɔɔ fie saa da no ara.
8. Dɛn nti na asɛnnibea no buu Jesse Cantwell fɔ sɛ ɔyɛ obi a ɔde basabasayɛ ba?
8 Asram kakraa bi akyi wɔ September 1938 no, wɔde Cantwell abusua no kɔɔ asɛnnibea wɔ New Haven. Nea wogyinaa so buu Newton, Russell, ne Jesse fɔ ne sɛ wɔresrɛsrɛ sika bere a wonni tumi krataa. Ɛwom sɛ wɔde asɛm no kɔdan Asɛnnibea Kunini a ɛwɔ Connecticut no mpɛn pii de, nanso wobuu Jesse fɔ sɛ ɔreyɛ ade a ɛsɛe asomdwoe​—ɔde basabasayɛ reba. Dɛn ntia? Efisɛ mmarima baanu a wɔyɛ Katolekfo a wotiee ɔkasa a wɔakyere agu apaawa so no kae wɔ asɛnnibea hɔ sɛ, nsɛm bi wɔ ɔkasa no mu a etia wɔn som, na ɛno na ɛhyɛɛ wɔn abufuw. Mpanyimfo a wɔwɔ yɛn ahyehyɛde no mu no de asɛm no kɔdan U.S. Asɛnnibea Kunini a ɛno na ɛyɛ asɛnnibea kɛse paa wɔ ɔman no mu no sɛ ɛnsɛ sɛ wogye atɛn ahorow a wɔadi kan abu no tom.
9, 10. (a) Atemmu bɛn na U.S. Asɛnnibea Kunini no de mae wɔ Cantwell abusua no asɛm no ho? (b) Mfaso bɛn na yɛda so ara nya fi saa atemmu a wɔde mae no mu?
9 Efi March 29, 1940 no, Ɔtemmufo Panyin Charles E. Hughes ne atemmufo baawɔtwe a wɔwɔ asɛnnibea hɔ no tiee Onua Hayden Covington a ɔyɛ Yehowa Adansefo no mmaranimfo no asɛm. * Bere a Connecticut ɔmantam no mmaranimfo bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛka n’asɛm de akyerɛ sɛ Adansefo no yɛ basabasayɛfo no, atemmufo no mu biako bisae sɛ: “Wɔ Kristo Yesu bere so no na nnipa ani nnye asɛm a na ɔreka no ho, anaa meboa?” Ɔman no mmaranimfo no buae sɛ: “Wommoa, sɛ mɛkae a, Bible san ka nea wɔde yɛɛ Yesu bere a na ɔreka saa asɛm no.” Monhwɛ anwonwasɛm! Ɛte sɛ nea asɛm a na ɔman no mmaranimfo no reka ne sɛ Adansefo no wɔ Yesu afã, ɛnna ɔman no nso wɔ wɔn a wobuu Yesu fɔ no afã. Wɔ May 20, 1940 no, Asɛnnibea no yɛɛ adwenkoro buu Adansefo no bem.
Hayden Covington (anim, mfinimfini), Glen How (benkum), ne afoforo a wɔrefi asɛnnibea bere a wodii nkonim no
10 Dɛn na efii atɛn a Asɛnnibea no bui no mu bae? Ɛmaa ɔsom mu ahofadi mu trɛwee, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔman mũ no nyinaa, ɔmantam, anaa ɔmansin biara rentumi mfa mmara kwan so nsiw ɔsom ho kwan. Afei nso, Asɛnnibea no behui sɛ biribiara nni nea Jesse yɛe “no . . . ho a ebetumi asɛe ɔmanfo asomdwoe.” Enti, wɔdaa no adi pefee wɔ atemmu no mu sɛ Yehowa Adansefo nyɛ nnipa a wɔsɛe ɔmanfo asomdwoe. Hwɛ nkonim kɛse a Onyankopɔn nkurɔfo dii wɔ asɛnnibea! Mfaso bɛn na yɛda so ara nya fi mu? Mmaranimfo bi a ɔyɛ Ɔdansefo kae sɛ: “Hokwan a yɛwɔ sɛ yɛsom bere a obiara ntumi nsiw yɛn kwan no ama yɛn a yɛyɛ Adansefo nnɛ tumi ka anidaso a yɛwɔ no ho asɛm kyerɛ nkurɔfo wɔ baabiara a yɛte.”
Wɔyɛ Amammɔfo Anaa Wɔn a Wɔka Nokware no Ho Asɛm?
11. Ɔsatu bɛn na anuanom a wɔwɔ Canada de wɔn ho hyɛɛ mu, na dɛn ntia?
11 Wɔ afe 1940 mfe no mu no, Yehowa Adansefo a wɔwɔ Canada hyiaa ɔtaa a emu yɛ den. Enti, wɔ afe 1946 no, yɛn nuanom de nnafua 16 yɛɛ ɔsatu kyekyɛɛ kratawa bi a n’asɛmti ne Quebec’s Burning Hate for God and Christ and Freedom Is the Shame of All Canada, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmanfo behu sɛ Ɔman no atena ɔsom mu ahofadi so. Saa kratawa a na ɛyɛ nkratafa anan yi kaa basabasayɛ a asɔfo hyɛ akyi, atirimɔdensɛm a polisifo di, ne aninyanne a wɔde yɛn nuanom a wɔwɔ Quebec mantam no mu afa mu no ho asɛm pii. Kratawa no kae sɛ: “Wogu so rekyere Yehowa adansefo bere a wɔnyɛɛ bɔne biara. Sobo bɛyɛ 800 na wɔde abɔ Yehowa adansefo a wɔwɔ Greater Montreal.”
12. (a) Wɔn a wɔsɔre tia yɛn no yɛɛ wɔn ade dɛn wɔ kratawa ho ɔsatu no ho? (b) Sobo bɛn na wɔde bɔɔ yɛn nuanom? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
12 Kratawa no maa Quebec Ɔman Soafo Panyin Maurice Duplessis ne Roma Katolek Sɔfopɔn Villeneuve yɛɛ biako kae sɛ “wɔnsɔre ntia” Adansefo no “denneennen.” Nnipa dodow a na wɔredi wɔn asɛm wɔ asɛnnibea no bu bɔɔ ho fi 800 koduu 1,600. Onuawa kwampaefo bi kae sɛ: “Polisifo no kyeree yɛn mpɛn pii ma enti na yentumi nkae mpɛn dodow a wɔakyere yɛn.” Wɔbɔɔ Adansefo a wɔkyeree wɔn no sobo sɛ wɔrekyekyɛ kratawa a “amammɔesɛm” wom. *
13. Henanom na wodii kan bɔɔ wɔn sobo sɛ wɔyɛ amammɔfo, na asɛnnibea no buaa asɛm no dɛn?
13 Wɔ afe 1947 no, wɔn a wodii kan bɔɔ wɔn sobo wɔ asɛnnibea sɛ wɔyɛ amammɔfo ne Onua Aimé Boucher ne ne mmabea Gisèle a wadi mfe 18, ne Lucille a wadi mfe 11 no. Ná wɔakyekyɛ Quebec’s Burning Hate kratawa no bi wɔ baabi a ɛbɛn wɔn afuw a ɛwɔ mmepɔw mu wɔ Quebec City no anafo fam, nanso na ntease nnim sɛ wɔbɛbɔ wɔn sobo sɛ wɔyɛ basabasayɛfo a wonni mmara so. Onua Boucher yɛ ɔbarima a ɔmpɛ ne ho asɛm a ɔyɛ n’afuw ketewaa bi mu adwuma, na sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ kurom a, ɔtena ne pɔnkɔ so. Nanso, na wɔde aninyanne a wɔaka ho asɛm wɔ kratawa no mu bi ayɛ ɔne n’abusua no. Ɔtemmufo a ɔmpɛ Adansefo no asɛm a na ɔredi asɛm no annye adanse a ɛkyerɛ sɛ Boucher abusua no ho nni asɛm no antom. Mmom no, ogyee kwaadubɔfo no asɛm a ɔkae sɛ kratawa no mu nsɛm ma obi nya afoforo ho tan ma enti ɛsɛ sɛ wobu Boucher abusua no fɔ no toom. Enti nea ɔtemmufo no yɛe no kyerɛ sɛ: Ɛyɛ bɔne sɛ obi bɛka nokware! Wɔbɔɔ Aimé ne Gisèle sobo sɛ wɔyɛ amammɔfo, na mpo wɔde Lucille a na ɔyɛ abofra no too afiase nnanu. Anuanom de asɛm no kɔdan Canada Asɛnnibea Kunini a ɛno na ɛyɛ asɛnnibea kɛse paa wɔ ɔman no mu no, na wɔpenee so sɛ wobedi asɛm no.
14. Anuanom a na wɔwɔ Quebec no yɛɛ wɔn ade dɛn wɔ mfe a na ɔtaa no rekɔ so no mu?
14 Saa bere yi nyinaa na yɛn nuanom mmarima ne mmea akokodurufo a wɔwɔ Quebec no gu so reka Ahenni no ho asɛm no ɛmfa ho sɛ na wɔreyɛ wɔn basabasa, na mpɛn pii no, nneɛma pa fii mu bae. Bere a wofii ase kyekyɛɛ kratawa no wɔ afe 1946 no akyi mfe anan no, na Adansefo a wɔwɔ Quebec no anya nkɔanim fi 300 akodu 1,000! *
15, 16. (a) Canada Asɛnnibea Kunini no buaa Boucher abusua no asɛm no dɛn? (b) Saa nkonim a wodii no kaa yɛn nuanom ne afoforo dɛn?
15 Wɔ June 1950 no, Canada Asɛnnibea Kunini no a emu atemmufo yɛ baakron no nyinaa tenaa Aimé Boucher asɛm no so. Asram asia akyi wɔ December 18, 1950 no, Asɛnnibea no buu yɛn bem. Dɛn ntia? Onua Glen How, a ɔyɛ Adansefo no mmaranimfo a ɔretwitwa agye wɔn no kyerɛkyerɛɛ mu sɛ Asɛnnibea no gyee asɛm a ɔkae no toom. Sɛ yɛka sɛ obi yɛ “ɔmammɔfo” a, nea ɛkyerɛ ne sɛ, opiapia nkurɔfo ma wɔyɛ basabasa anaasɛ wɔtew aban so atua. Nanso “asɛm biara nni kratawa no mu a ɛrehyɛ biribi a ɛte saa ho nkuran, ma enti emu nsɛm no ntia mmara biara.” Onua How de kaa ho sɛ: “M’ankasa mihui sɛ Yehowa na ɔma yedii nkonim.” *
16 Nokwarem no, atemmu a Asɛnnibea Kunini no de mae no yɛ nkonimdi kɛse ma Onyankopɔn Ahenni no. Ɛbɔɔ amammɔesɛm ho sobo 122 a na wɔde abɔ Adansefo a wɔwɔ Quebec no nyinaa gui. Bio nso, atemmu a Asɛnnibea no de mae no kyerɛ sɛ afei de, na Canada ne aman a wɔdɔm Britain Adehyeman no mufo wɔ hokwan sɛ wɔkyerɛ wɔn adwene wɔ biribi a aban a ɛwɔ wɔn man mu reyɛ ho. Saa nkonimdi yi brɛɛ tumi a Quebec Asɔre no ne Ɔmantam no wɔ no ase, na amma wɔankɔ so antiatia Yehowa Adansefo ahofadi so bio. *
Wɔyɛ Aguadifo Anaa Wɔn a Wɔde Nsi Ka Onyankopɔn Ahenni Ho Asɛm?
17. Mmara bɛn na aban ahorow bi bɔ mmɔden sɛ yebedi so de ayɛ asɛmpaka adwuma no?
17 Sɛnea Kristofo a wɔtenaa ase tete no ‘amfa Onyankopɔn asɛm anni gua’ no, saa ara na Yehowa nkurɔfo a wɔwɔ hɔ nnɛ nso mfa nni gua. (Monkenkan 2 Korintofo 2:​17.) Ne nyinaa akyi no, aban ahorow bi bɔ mmɔden sɛ wɔbɛma yɛadi aguadi ho mmara a ɛwɔ ɔman no mu so bere a yɛreyɛ asɛnka adwuma no. Momma yensusuw nsɛm a yɛde kɔɔ asɛnnibea a na wɔde rehwɛ sɛ Yehowa Adansefo yɛ aguadifo anaasɛ wɔyɛ asɛmpakafo no mu abien ho nhwɛ.
18, 19. Dɛn na atumfoɔ a wɔwɔ Denmark no yɛe sɛ wɔde besiw asɛmpaka adwuma no kwan?
18 Denmark. Wɔ October 1, 1932 no, wɔhyɛɛ mmara sɛ obi nni hokwan sɛ ɔtɔn nhoma bere a onni aguadi tumi krataa. Nanso, yɛn nuanom ankogye tumi krataa biara. Ade kyee no, adawurubɔfo baanum kɔkaa asɛm no wɔ Roskilde, kurow bi a ɛda Copenhagen, ɔman no ahenkurow atɔe fam bɛboro kilomita 30 mu. Eduu anwummere no, na wonhu ɔdawurubɔfo bi a wɔfrɛ no August Lehmann. Ná wɔakyere no sɛ ɔretɔn ade bere a onni tumi krataa.
19 Wɔ December 19, 1932 no, wɔde August Lehmann kɔɔ asɛnnibea. Ogye toom sɛ ɔkɔɔ nkurɔfo nkyɛn de Bible ho nhoma kɔmaa wɔn, nanso wannye antom sɛ na ɔredi gua. Asɛnnibea no ne no yɛɛ adwene. Asɛnnibea no kae sɛ: “Nea wɔabɔ no sobo no . . . wɔ sika a ɔde hwɛ ne ho, na onnya mfaso biara wɔ adwuma a ɔreyɛ no ho, na ɔnyɛɛ n’adwene nso sɛ ɔrepɛ mfaso, na adwuma no ma ɔno mmom bɔ ka.” Asɛnnibea no ne Adansefo no yɛɛ adwene sɛ nea na Lehmann reyɛ no “nyɛ aguadi.” Nanso, na Onyankopɔn nkurɔfo atamfo no ayɛ wɔn adwene sɛ wɔde wɔn nsa bɛto asɛnka adwuma a yɛreyɛ wɔ ɔman no mu nyinaa so. (Dw. 94:​20) Ɔman no kwaadubɔfo no de asɛm no koduu ɔman no Asɛnnibea Kunini no anim. Dɛn na yɛn nuanom no yɛe?
20. Denmark Asɛnnibea Kunini no buaa asɛm no dɛn, na dɛn na yɛn nuanom yɛe wɔ ho?
20 Aka dapɛn ma Asɛnnibea Kunini no adi asɛm no, Adansefo a wɔwɔ Denmark nyinaa yeree wɔn ho yɛɛ asɛnka adwuma no denneennen. Asɛnnibea Kunini no buaa asɛm no Benada, October 3, 1933. Egyee asɛnnibea a edi kan no atemmu no toom sɛ August Lehmann nyɛɛ biribi a etia mmara. Eyi kyerɛ sɛ na Adansefo no betumi akɔ so aka asɛm no a obiara nsiw wɔn kwan. Anuanom yeree wɔn ho yɛɛ asɛnka adwuma no kɛse de daa Yehowa ase wɔ saa nkonim a wodii no ho. Efi bere a Asɛnnibea no buaa saa asɛm no, yɛn nuanom a wɔwɔ Denmark no akɔ so ayɛ asɛnka adwuma no a aban no nsiw wɔn kwan bio.
Adansefo akokodurufo a na wɔwɔ Denmark wɔ afe 1930 mfe no mu
21, 22. Gyinae bɛn na U.S. Asɛnnibea Kunini no sii wɔ Onua Murdock asɛm no ho?
21 United States. Kwasida, February 25, 1940 no, wɔkyeree ɔkwampaefo bi a wɔfrɛ no Robert Murdock, Jr., ne Adansefo foforo baason bere a na wɔreka asɛmpa no wɔ Jeannette, kurow bi a ɛbɛn Pittsburgh wɔ Pennsylvania mantam mu no. Wobuu wɔn fɔ sɛ wɔantɔ tumi krataa a ɛbɛma wɔatumi de nhoma ama afoforo. Bere a wɔde asɛm no kɔdan U.S. Asɛnnibea Kunini no, wɔpenee so sɛ wobedi asɛm no.
22 Asɛnnibea Kunini no buaa asɛm no, na wobuu Adansefo no bem wɔ May 3, 1943. Asɛnnibea no ampene tumi krataa a na wɔkyerɛ sɛ wonnye no so, efisɛ sɛ wɔyɛ saa a na “wɔretiatia ahofadi a Ɔman no Amanyɔ Mmara ama wɔanya no so.” Asɛnnibea no bɔɔ mmara a ɛwɔ kurow no mu gui kae sɛ “ɛremma nsɛnkyerɛwfo ntumi nkyerɛ wɔn adwene wɔ nsɛm ho, na saa ara nso na ɛremma obi ntumi mfa ne ho nhyɛ ɔsom a ɔpɛ mu.” Bere a Ɔtemmufo William O. Douglas de atemmufo dodow no ara adwenkyerɛ reto gua no, ɔkaa adwuma a Yehowa Adansefo reyɛ no ho asɛm sɛ “ɛnyɛ asɛmpa no nko na wɔreka; ɛnyɛ nyamesom nhoma bi kɛkɛ na wɔrekyekyɛ. Mmom, wɔreyɛ abien no nyinaa.” Ɔde kaa ho sɛ: “Saa ɔsom adwuma a wɔyɛ no som bo kɛse . . . te sɛ nea nkurɔfo kɔsom wɔ asɔredan mu ne asɔfo a wogyina asɔremma anim yɛ asɔre no pɛpɛɛpɛ.”
23. Dɛn nti na nkonim ahorow a yedii wɔ asɛnnibea wɔ afe 1943 mu no ho hia yɛn nnɛ?
23 Asɛnnibea Kunini no atemmu no yɛɛ nkonimdi kɛse maa Onyankopɔn nkurɔfo. Esii so dua sɛ yɛyɛ Kristofo asɛmpakafo ampa, na yɛnyɛ aguadifo. Saa da no ara nso, May 3, 1943 no, Yehowa Adansefo ho nsɛm 13 a wɔde kɔɔ Asɛnnibea Kunini no anim no, wodii nkonim wɔ emu 12 mu, a na Murdock asɛm no nso ka ho. Atɛn a asɛnnibea no bui no abɛyɛ sɛnnahɔ titiriw a wɔagyina so adi nsɛm a nnansa yi wɔn a wɔsɔre tia yɛn no asan de akɔ asɛnnibea sɛ yenni hokwan sɛ yɛka Ahenni no ho asɛm wɔ baguam ne afie afie no.
“Ɛsɛ sɛ Yetie Onyankopɔn sɛ Sodifo Mmom Sen Nnipa”
24. Sɛ aban bi de ne nsa to asɛnka adwuma no so a, dɛn na yɛyɛ wɔ ho?
24 Sɛ́ Yehowa asomfo no, sɛ aban ahorow no ma yɛn kwan wɔ mmara mu sɛ yɛnka Ahenni no ho asɛm a biribiara nsiw yɛn kwan a, yɛn ani sɔ paa. Nanso, sɛ aban bi de ne nsa to asɛnka adwuma no so a, nea yɛyɛ ne sɛ, yɛsesa akwan a yɛfa so ka asɛm no, na yɛfa ɔkwan biara a yebetumi so yɛ asɛnka adwuma no. Sɛnea asomafo no yɛe no, “ɛsɛ sɛ yetie Onyankopɔn sɛ sodifo mmom sen nnipa.” (Aso. 5:​29; Mat. 28:​19, 20) Saa ara nso na yetumi de asɛm no kɔdan asɛnnibea ahorow sɛ wɔmma aban no nyi ne nsa mfi yɛn adwuma no so. Momma yensusuw nhwɛso abien ho nhwɛ.
25, 26. Nsɛm bɛn na esisii wɔ Nicaragua a ekopuee Asɛnnibea Kunini a ɛwɔ hɔ no anim, na dɛn na efii mu bae?
25 Nicaragua. Wɔ November 19, 1952 no, Donovan Munsterman a ɔyɛ ɔsɛmpatrɛwfo ne baa dwumadibea sohwɛfo no kɔɔ ɔman no ahenkurow Managua mu kohuu wɔn a wɔwɔ Aban Asoɛe a Ɛhwɛ Ahɔho So no. Ná wɔaka akyerɛ no sɛ onkohu Ɔpanyin Arnoldo García a ɔhwɛ asoɛe hɔ no. Ɔpanyin no ka kyerɛɛ Donovan sɛ wɔabara Yehowa Adansefo a wɔwɔ Nicaragua nyinaa sɛ “mma wɔnka wɔn gyidi ne wɔn som ho asɛm nkyerɛ nkurɔfo.” Bere a obisaa Ɔpanyin García nea enti a ɔreka saa no, ɔkae sɛ aban soafo no mmaa Adansefo no tumi krataa a wɔde bɛyɛ wɔn som adwuma no, na wɔabɔ wɔn sobo nso sɛ wɔyɛ kɔmunisfo. Henanom na wɔbɔɔ yɛn sobo yi? Ná ɛyɛ Roma Katolek asɔfo no.
Anuanom a na wɔwɔ Nicaragua bere a wɔbaraa yɛn adwuma no
26 Ntɛm ara na Onua Munsterman de asɛm no kɔtoo Ɔman no Asoɛe a Ɛhwɛ Aban Nnwuma ne Nyamesom So ne afei Ɔmampanyin Anastasio Somoza García anim, nanso wɔanyɛ ho hwee. Enti anuanom sesaa ɔkwan a wɔfa so ka asɛm no. Wɔtoo Ahenni Asa no mu, wɔyɛɛ nhyiam wɔ akuw nketewa mu, na wogyaee abɔnten so adansedi, nanso wɔkɔɔ so kaa Ahenni no ho asɛm no. Saa bere yi ara mu no, wɔde asɛm no kɔdan Nicaragua Asɛnnibea Kunini no sɛ wonni wɔn asɛm mma wɔn, na wɔka kyerɛɛ Asɛnnibea no sɛ wɔmma aban no nyi ne nsa mfi wɔn so. Atesɛm nkrataa kaa yɛn adwuma no a aban no abara ne nsɛm a yɛde akɔdan Asɛnnibea Kunini no ho asɛm kɔɔ akyiri, na Asɛnnibea no penee so sɛ wobedi asɛm no. Dɛn na efii mu bae? Wɔ June 19, 1953 no, atemmufo a wɔwɔ Asɛnnibea Kunini no mu nyinaa buu Adansefo no bem, na wɔde too gua. Asɛnnibea no hui sɛ aban no nsa a ɔde ato yɛn so no tia amanyɔ mmara a ɛma obiara tumi kyerɛ n’adwene, de n’ahonim di dwuma, na ɔde ne ho hyɛ ɔsom biara a ɔpɛ mu no. Asɛnnibea no san hyɛe sɛ Nicaragua aban no nhwɛ mma ayɔnkofa pa nsan mmɛda wɔne Adansefo no ntam.
27. Dɛn nti na atemmu a Asɛnnibea no de mae no yɛɛ Nicaraguafo nwonwa, na anuanom tee nka dɛn wɔ nkonim a wodii no ho?
27 Ɛyɛɛ Nicaraguafo nwonwa sɛ Asɛnnibea Kunini no adi asɛm no ama Adansefo no. Ɛde besi saa bere no, na asɔfo no wɔ tumi paa ma enti na Asɛnnibea no mpɛ sɛ wɔne wɔn benya asɛm biara. Afei nso, na aban mpanyimfo no wɔ tumi kɛse ma enti na ɛyɛ den paa sɛ Asɛnnibea no bedi asɛm atia wɔn. Ná yɛn nuanom gye di paa sɛ asɛnka adwuma no a wɔannyae ne ahobammɔ a wonya fii wɔn Hene no hɔ nti na wodii saa nkonim no.​—Aso. 1:8.
28, 29. Wɔ afe 1985 mu hɔ no, nsɛm bɛn na esisii wɔ Zaire?
28 Zaire. Afe 1985 mu hɔ no, na Adansefo bɛyɛ 35,000 na wɔwɔ Zaire, a ɛnnɛ wɔfrɛ no Democratic Republic of Congo no. Nea ɛbɛyɛ na baa dwumadibea no atumi ahwɛ Ahenni nnwuma a ɛrenya nkɔso wɔ ɔman no mu so no, wofii ase sisii adan foforo. Wɔ December 1985 no, wɔyɛɛ amanaman ntam nhyiam wɔ ɔman no ahenkurow Kinshasa mu, na nnipa a wofi ɔman no mu ne aman foforo so a wɔn dodow yɛ 32,000 a wɔbaa nhyiam no hyɛɛ agoprama a ɛwɔ kurow no mu so mã. Nanso, ankyɛ koraa na Yehowa asomfo asetena fii ase sesae. Dɛn na esii?
29 Ná Onua Marcel Filteau, a ɔyɛ ɔsɛmpatrɛwfo a ofi Quebec, Canada, a na wafa ɔtaa a Duplessis de baa wɔn so no mu bi no resom wɔ Zaire saa bere no. Ɔkaa nea esii no: “Wɔ March 12, 1986 no, wɔde krataa bi brɛɛ mpanyimfo a wodi asafo no anim no sɛ wonnnye Yehowa Adansefo a wɔwɔ Zaire no nntom bio wɔ mmara mu.” Mobutu Sese Seko, a ɔyɛ ɔmampanyin no na na ne nsa hyɛ ase.
30. Gyinae a emu yɛ duru bɛn na na ehia sɛ Baa Boayikuw no si, na dɛn na wɔyɛɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛyɛ?
30 Ɛda a edi hɔ no, wɔbɔɔ amanneɛ wɔ ɔman no radio so sɛ: “Efi nnɛ rekɔ yɛrente Yehowa Adansefo ho asɛm bio wɔ [Zaire].” Amonom hɔ ara na wofii ase de ɔtaa a emu yɛ den baa anuanom so. Wɔsɛee Ahenni Asa ahorow, wowiaa yɛn nuanom nneɛma, wɔkyeree ebinom, wɔde ebinom guu afiase, na wɔhwee ebinom. Wɔde Adansefo no mma mpo guu afiase. Wɔ October 12, 1988 no, aban no gyee ahyehyɛde no agyapade, na wɔmaa asraafo kuw bi a wɔfrɛ wɔn Civil Guard kɔtenaa Betel. Anuanom a wodi asafo no anim no de wɔn adesrɛde kɔtoo Ɔmampanyin Mobutu anim, nanso wɔannya mmuae biara. Ɛbaa saa no, na ɛsɛ sɛ Baa Boayikuw no si gyinae bi a emu yɛ duru, “So yɛmfa asɛm no nkɔdan Asɛnnibea Kunini no, anaasɛ yɛntwɛn?” Timothy Holmes a saa bere no na ɔyɛ ɔsɛmpatrɛwfo na ɔsan yɛ Baa Boayikuw no ntam nkitahodifo no kae sɛ, “Yɛhwehwɛɛ Yehowa nyansa ne n’akwankyerɛ.” Bere a boayikuw no bɔɔ mpae na wosusuw asɛm no ho wiei no, wohui sɛ na ɛnyɛ bere a ɛfata sɛ wɔde asɛm no kɔ asɛnnibea. Enti, wɔde wɔn adwene sii anuanom a wɔbɛhwɛ wɔn ne akwan a wɔbɛfa so ayɛ asɛnka adwuma no so.
“Bere a na wɔredi asɛm no, yehuu sɛnea Yehowa tumi ma nneɛma sakra”
31, 32. Atemmu a ɛyɛ anigye bɛn na Zaire Asɛnnibea Kunini no de mae, na eyi kaa yɛn nuanom dɛn?
31 Mfe pii twaam. Nhyɛso a na wɔde ba Adansefo no so no ano brɛɛ ase, na afei na ɔman no ntoto nnipa ahofadi ase bio. Afei Baa Boayikuw no hui sɛ bere aso sɛ wɔde asɛm no kɔdan Zaire Asɛnnibea Kunini no. Anigyesɛm ne sɛ, Asɛnnibea Kunini no penee so sɛ wobedi asɛm no. Enti wɔ January 8, 1993, bɛyɛ mfe ason akyi fi bere a aban no de ne nsa too yɛn adwuma no so no, Asɛnnibea no buaa asɛm no sɛ aban no nsa a ɔde ato Adansefo no so no tia mmara, na woyi fii hɔ. Wo de, susuw nea na ebetumi aba atemmufo no so ho hwɛ! Wɔde wɔn nkwa too asiane mu bɔɔ ɔmampanyin no asɛm gui! Onua Holmes kae sɛ, “Bere a na wɔredi asɛm no, yehuu sɛnea Yehowa tumi ma nneɛma sakra.” (Dan. 2:​21) Nkonim a yedii no hyɛɛ yɛn nuanom gyidi den. Wɔtee nka sɛ Ɔhene Yesu na wakyerɛ ne nkurɔfo bere a ɛfata sɛ wɔyɛ asɛm no ho biribi ne ɔkwan a ɛsɛ sɛ wɔfa so yɛ saa.
Adansefo a wɔwɔ Democratic Republic of Congo ani agye sɛ wɔwɔ ahofadi a wɔde resom Yehowa
32 Bere a aban no yii ne nsa fii yɛn adwuma no so no, wɔmaa kwan maa baa dwumadibea no de asɛmpatrɛwfo baa ɔman no mu, wosii Betel foforo, na wotumi kraa Bible ho nhoma nso. * Hwɛ sɛnea ɛyɛ anigye sɛ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔwɔ wiase nyinaa ahu sɛ Yehowa bɔ abusuabɔ a ɔne ne nkurɔfo wɔ ho ban!​—Yes. 52:10.
“Yehowa Ne Me Boafo”
33. Dɛn na yɛasua afi nsɛm kakra a wɔadi wɔ asɛnnibea a yɛasusuw ho yi mu?
33 Nsɛm bi a yɛde akɔ asɛnnibea a yɛasusuw ho no ada no adi sɛ Yesu adi ne bɔhyɛ yi so: “Mɛma mo ano ne nyansa a wɔn a wɔsɔre tia mo nyinaa ntumi nnyina ano anaa wɔmmɔ ngu.” (Monkenkan Luka 21:​12-15.) Ɛtɔ mmere bi a, yehu sɛ Yehowa yi nnipa bi a wɔte sɛ Gamaliel wɔ yɛn bere yi so ma wɔbɔ ne nkurɔfo ho ban anaa ɔka atemmufo ne mmaranimfo a wɔwɔ akokoduru koma ma wobu atɛntrenee. Yehowa amma yɛn atamfo no amfa wɔn akode no ansɛe yɛn. (Monkenkan Yesaia 54:​17.) Ɔsɔretia ntumi ngu Onyankopɔn adwuma.
34. Dɛn nti na nkonim a yɛadi wɔ asɛnnibea no yɛ nwonwa, na dɛn na eyi ma yehu? (Hwɛ adaka a n’asɛmti ne “ Nkonim a Yedii Wɔ Asɛnnibea a Ɛmaa Ahenni Ho Asɛnka no Nyaa Nkɔso” no nso.)
34 Dɛn nti na nkonim ahorow a yɛadi wɔ asɛnnibea no yɛ nwonwa saa? Wo de, susuw eyi ho hwɛ: Yehowa Adansefo nyɛ nnipa a wɔagye din anaa wɔwɔ tumi. Yɛntow aba, yɛntaa amanyɔkuw biara akyi, na yɛmfa yɛn ho nhyehyɛ amanyɔfo nsɛm mu nso. Bio nso, wobu yɛn mu dodow no ara a wɔde yɛn kɔ asɛnnibea akɛse anim no sɛ “nnipa a wonsuaa nhoma na wɔyɛ mpapahwekwa.” (Aso. 4:​13) Enti wɔ nnipa ani so de, biribiara nni hɔ a ɛsɛ sɛ ɛkanyan asɛnnibea ahorow no ma wobu yɛn bem na wodi tia nyamesomfo ne amanyɔfo a wɔwɔ tumi a wɔsɔre tia yɛn no. Ne nyinaa akyi no, asɛnnibea ahorow no adi yɛn asɛm ama yɛn mpɛn pii! Nkonim a yɛadi wɔ asɛnnibea no da no adi sɛ yɛnam ‘Onyankopɔn anim, na Kristo ka yɛn ho.’ (2 Kor. 2:​17) Enti, yɛne ɔsomafo Paulo bom ka sɛ: “Yehowa ne me boafo; merensuro.”​—Heb. 13:6.
^ nky. 9 Saa Cantwell v. State of Connecticut asɛm no yɛ nsɛm 43 a wɔde kɔɔ U.S. Asɛnnibea Kunini no anim no mu nea edi kan a Onua Hayden Covington gyinaa mu maa anuanom. Owui wɔ afe 1978 mu. Ne yere Dorothy de nokwaredi som kosii sɛ owui afe 2015, na wadi mfe 92.
^ nky. 12 Wogyinaa mmara bi a wɔyɛe wɔ afe 1606 no so na ɛbɔɔ wɔn sobo. Ná mmara no kyerɛ sɛ sɛ asɛnni baguafo bi te nka sɛ asɛm a obi kae betumi ama afoforo anya wɔn mfɛfo ho tan, na sɛ asɛm a ɔkae no yɛ nokware mpo a, wobetumi abu onii no fɔ.
^ nky. 14 Anuanom 164 a wɔyɛ bere nyinaa asomfo na na wɔsom wɔ Quebec wɔ afe 1950 mu. Ná wɔn mu 63 akɔ Gilead, na ɛmfa ho sɛ na wonim sɛ wobehyia ɔsɔretia a emu yɛ den no, wofi wɔn pɛ mu gye toom sɛ wɔbɛka asɛm no wɔ hɔ.
^ nky. 15 Ná Onua W. Glen How yɛ mmaranimfo a ɔwɔ akokoduru a efi afe 1943 besi 2003 no, ogyinaa Yehowa Adansefo a wɔwɔ Canada ne aman foforo so ananmu dii nsɛm ɔhaha pii maa wɔn.
^ nky. 16 Sɛ wopɛ sɛ wuhu pii fa saa asɛm yi ho a, hwɛ asɛm a n’asɛmti ne “Ɔko No Nyɛ Wo Ko, Ɛyɛ Onyankopɔn Ko” a ɛwɔ Nyan! a ɛbae May 8, 2000, kra-tafa 18-24 mu no.
^ nky. 32 Bere bi akyi no, Civil Guard asraafo no fii Betel; nanso asafo no san kosii Betel wɔ baabi foforo.
Ɛyɛɛ dɛn na asɛnnibea ahorow no hui sɛ yɛyɛ asɛmpakafo, na yɛnyɛ basabasayɛfo, amammɔfo, anaa aguadifo?
Mfaso bɛn na nnɛ yenya fi nkonim a yedii bere bi no so?
Sɛ wɔbara yɛn asɛnka adwuma no a, dɛn na yɛyɛ?
Wɔ nnipa ani so no, dɛn nti na ɛyɛ nwonwa sɛ Yehowa nkurɔfo atumi adi nkonim pii wɔ asɛnnibea ma abɛyɛ sɛnnahɔ?
Ɔkwan bɛn so na nsɛm a wodii wɔ asɛnnibea a yɛasusuw ho yi ahyɛ wo gyidi den?
NKONIM A YEDII WƆ ASƐNNIBEA A ƐMAA AHENNI HO ASƐNKA NO NYAA NKƆSO
GYINAESI November 11, 1927
ASƐM Ɔsom mu ahofadi.
NEA ESII Polisini bi ka kyerɛɛ Onua Adolf Huber sɛ onnyae asɛnka adwuma a ɔreyɛ no, na ɔkae sɛ yɛn nua no de basabasayɛ reba nyamesomfo ntam, na ogyee Bible ho nkratawa a okura no.
ATEMMU Onua Huber kae wɔ Ɔman no Asɛnnibea Kunini no anim sɛ nea polisini no yɛe no tia mmara. Asɛnnibea no hui sɛ nyamesom nkratawa a polisini no gye fii ne nsam no tia “ɔsom mu ahofadi” ho mmara no.
NEA EFI MU BAE Atemmu a wɔde mae no amma polisifo no anhaw Bible Asuafo no wɔ adwuma a wɔreyɛ no ho bio.
GYINAESI July 9, 1935
ASƐM Kasa mu ahofadi.
NEA ESII Wɔkyeree Adansefo baasia sɛ wɔrekyekyɛ nhoma a “etia ɔman no mmara ne ɔman no bammɔ.” Wɔde anuanom guu afiase nnafua 15.
ATEMMU Asɛnnibea Kɛse (Asɛnnibea Kunini) no hui sɛ adwuma a Adansefo no yɛ no mfa ɔhaw biara mma, asɛm biara nni wɔn nhoma ahorow no mu a ɛsɛe ɔmanfo asomdwoe, na wɔwɔ hokwan nso sɛ wɔkyerɛkyerɛ afoforo.
NEA EFI MU BAE Ná nsɛm foforo 530 a ɛfa Adansefo ho a wodii fi afe 1933 besi afe 1939 no ka nsɛm a wɔde ho atemmu mae no ho, na saa atemmu no maa anuanom nyaa hokwan wɔ mmara mu. Ɛnnɛ, yetumi yɛ asɛnka adwuma no a biribiara nsiw yɛn kwan.
GYINAESI March 17, 1953
ASƐM Kasa ne nsɛnkyerɛw mu ahofadi.
NEA ESII Wɔkyeree Onua Pieter Havenaar sɛ wabu mmara a ɛkyerɛ sɛ Benada ne Wukuda anɔpa 9:​00 kosi anɔpa 11:​00 nkutoo na wɔwɔ hokwan sɛ wɔkyekyɛ nhoma no so.
ATEMMU Asɛnnibea Kunini no hui sɛ mmara a wɔahyɛ no mu yɛ den dodo.
NEA EFI MU BAE Atemmu a wɔde mae yi bɔɔ mmara biara a ɛmma kwan sɛ nkurɔfo de nhoma bɛma afoforo no gui.
GYINAESI October 6, 1953
ASƐM Ɔsom ne kasa mu ahofadi.
NEA ESII Quebec City mmara bi ka sɛ sɛ wobɛkyekyɛ nhoma a, gye sɛ polisifo ma wo tumi krataa. Wɔde Onua Laurier Saumur a ɔyɛ ɔhwɛfo kwantufo too afiase asram abiɛsa sɛ wabu saa mmara no so.
ATEMMU Asɛnnibea Kunini no hui sɛ mmara a wɔde redi Adansefo no nni nnyinaso. Asɛnnibea no hui sɛ Bible ho nhoma a Yehowa Adansefo rekyekyɛ ma ɔmanfo no ka Kristofo som adwuma a wɔreyɛ no ho, na wɔayɛ nhoma no mu nhwehwɛmu agye atom wɔ mmara mu.
NEA EFI MU BAE Atemmu a wɔde mae no bɔɔ mmara bɛboro 1,600 a na wɔahyehyɛ wɔ Quebec mantam mu no gui.
GYINAESI July 13, 1983
NEA ESII Wɔkyeree anuanom mmea baanu sɛ wɔrekyekyɛ Bible ho nhoma. Wɔbɔɔ wɔn sobo sɛ wɔresɛe “Ɔmanfo Asomdwoe,” na wɔde wɔn guu afiase nnanum.
ATEMMU Asɛnnibea Kunini no hui sɛ wommuu mmara biara so, na asɛm a wɔreka sɛ wɔresɛe ɔmanfo asomdwoe no nni nnyinaso biara.
NEA EFI MU BAE Wɔ nkonimdi yi akyi no, anuanom a na wɔkyere wɔn ne nhoma a na wogye fi wɔn nsam no baa fam koraa.
GYINAESI May 26, 1986
NEA ESII Bere a Adansefo mmusua abiɛsa kɔe sɛ wɔde wɔn din rekɔhyɛ mmara mu sɛ wɔyɛ Yehowa Adansefo no, wɔde anuanom 23 guu afiase sɛ wɔde basabasayɛ reba ɔman no anaa amanyɔsɛm mu.
ATEMMU Asɛnnibea Kunini no bɔɔ saa asɛm no gui, na wobuu Adansefo no bem, na wogye toom sɛ Yehowa Adansefo wɔ hokwan sɛ wɔde nea wogye di bɔ wɔn bra.
NEA EFI MU BAE Atemmu a wɔde mae no amma wɔankyere obiara wɔ Kristofo adwuma no ho bio, na ɛmaa Turkeyfo nyinaa nyaa hokwan sɛ wɔpaw ɔsom a wɔpɛ.
GYINAESI May 25, 1993
ASƐM Ahofadi a obi wɔ sɛ ɔka ne gyidi ho asɛm.
NEA ESII Eduu afe 1986 no, na wɔakyere Onua Minos Kokkinakis ato afiase mpɛn 18 sɛ wama nkurɔfo asesa wɔn som. Efi afe 1938 besi afe 1992 no, Greecefo mmara a ɛkyerɛ sɛ ɛnsɛ sɛ obi ma obi sesa ne som no so na wogyina kyeree Yehowa Adansefo bɛboro mpɛn 19,000.
ATEMMU Europa Asɛnnibea a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi Ho Nsɛm So no hui sɛ wɔn mmara no mma obi nkyerɛ n’adwene, mfa n’ahonim nni dwuma, mfa ne ho nhyɛ ɔsom a ɔpɛ mu; wohui nso sɛ aban no de ne ho gyigye ɔsom ho nsɛm mu dodo; na wɔkyerɛe sɛ Yehowa Adansefo yɛ ɔsom a “ɔman no gye tom.”
NEA EFI MU BAE Greece aban no hyɛe sɛ ɔman no mu atemmufo nyinaa nnye gyinae a wɔasi wɔ Kokkinakis ho no ntom, na eyi amma wɔamfa obiara anto afiase bio sɛ ɔrema obi asesa ne som.
GYINAESI June 17, 2002
ƆMAN United States
NEA ESII Akuraa bi a wɔfrɛ no Stratton a ɛwɔ Ohio mantam no mu hyɛɛ mmara sɛ ɛsɛ sɛ obiara a ɔka asɛm no wɔ afie afie no gye tumi krataa. Asɛnnibea a edi kan ne asɛnnibea a wɔde asɛm no kɔdan wɔn no nyinaa kae sɛ saa mmara no di mũ.
ATEMMU Asɛnnibea Kunini no kae sɛ mmara no mfa kwan mu, na wosii so dua sɛ obiara wɔ hokwan sɛ ɔde ne ho hyɛ ɔsom a ɔpɛ mu, na ɔkyerɛ n’adwene. Asɛnnibea no kae sɛ, Adansefo no kyerɛe sɛ “Kyerɛwnsɛm no na ɛma wɔn tumi sɛ wɔnka asɛm no.”
NEA EFI MU BAE Nkurow akɛse pii amfa mmara a ɛte saa a etia Yehowa Adansefo no anhaw wɔn wɔ asɛnka adwuma no ho bio.